METFP-PNUD : fiaraha-miasa matotra ho an’ny fampiofanana sy fampananan’asa ny tanora – METFP
➡️Tsy mijanona fotsiny amin’ny fampiofanana ireo tanora amin’ny fanaovana tao-trano ny sampan-draharaha ny Firenena Mikambana misahana ny Fampandrosoana na ny PNUD. Mamatsy milina ireo toeram-panodinana raketa ihany Koa izy ireo, ary raisina ho « Ouvriers spécialisés » ireo nisitraka fiofanana, hanatevina ireo fanamboarana ny foto-drafitrasa hatsangana ao amin’ny kaomina Tragnovaho sy ny fokontany Soamanitra.
📌Manampy betsaka ny asa efa ataon’ny Fanjakana n’y fiaraha-miasa toy izao hoy Ramatoa Minisitra VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, satria mifanaraka tanteraka amin’ny Velirano, izay mikatsaka hatrany ny fampananan’asa.
⏩Ankoatra ireo ivontoerana fanodinana raketa ho fanampin-tsakafo ho an’ny ondry aman’osy, dia nijery ifotony ny fandrosoan’ny asa fanorenana ny toerana fitehirizana hazandranomasina, tao amin’ny Fokontany Soamanitra Ramatoa Minisitra. Mahavelombolo ary mendrika fankasitrahana tenteraka izany, hoy izy, satria dia mamaly ny filan’ny faritra ny fanofanana omena ny mponina ao aminy, ka azo antoka hitondra fampandrosoana.
⏩Amin’ny maha toerana akaiky ranomasina azy dia tena manampy betsaka ny asa fiveloman’ny mponina ny fitehirizana ny hazandrano.
Tsy ho ela koa dia afaka hampiasaina ity toerana ity, raha ny fandroson’ny asa no jerena.
✅Nohararaotina ihany koa izao fotoam-pitsidihana izao nanoloran’ny Minisitra ny mari-panofanana ho an’ireo tanora, lahy sy vavy,miisa 15 niofana tamin’ny fanamboarana trano.